पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सेनापतिसम्म माग्नेबुढाको छोराको व्रतबन्धमा, तर, किन भए माग्नेबुढा नतमस्तक ? (भिडियो/फोटोफिचर) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सेनापतिसम्म माग्नेबुढाको छोराको व्रतबन्धमा, तर, किन भए माग्नेबुढा नतमस्तक ? (भिडियो/फोटोफिचर)
March 5, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Kollywood, Male, News, Videos 0
चर्चित हाँस्य कलाकार केदार घिमिरे माग्नेबुढाले आफ्नो छोराको वर्तबन्ध सम्पन्न गरेका छन् । आइतवार काठमाडौंमा एक भव्य कार्यक्रमसहित माग्नेबुढाले छोराको व्रतबन्ध सम्पन्न गरेका हुन् ।
माग्नेबुढाको छोराको व्रतबन्ध कार्यक्रममा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित तथा दिग्दज कलाकारदेखि नेपाली राजनीति क्षेत्रका हस्तिहरुहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
ललितपुर ग्वार्कोको एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न व्रतबन्ध कार्यक्रममा नेपाली राजनीति क्षेत्रका चर्चित अनुहार पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अहिलेका चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डित, चर्चित युवा राजनीतिज्ञ तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, वर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री लगायतको सहभागतिा रहेको थियो
त्यस्तै, नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित कलाकार भुवन थापा, करिष्मा मानन्धर, दिपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, कोमल ओली, संगीतकार टिका भण्डारी लगायत कलाकारहरुले उपस्थित भएर माग्नेका छोरालाई टिका लगाएर आर्शीवाद दिएका थिए ।
पञ्चेबाजा बजाएर सुरु भएको व्रतबन्ध पार्टीमा बिदेशी गीत बजाएर नाचेको थाहा पाएपछि माग्नेबुढाले बिदेशी गतिलाई बन्देज गरेर नेपाली गीतमा नाँचगान गर्न लगाएका थिए । यसले माग्नेबुढाको राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रियता कति रहेछ भन्ने झल्को देखाएको छ ।
व्रतबन्ध पार्टीको निकै रमाईलो वातावरणमा माग्नेका परिवार, बाउ, श्रीमती, छोरा , छोरी लगायत निकै हर्षित मुद्रामा देखिन्थे । माग्ने बुढाले आफैले क्यारिकेचर मार्फत ब्यंग्य गरेका प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको उपस्थितिले आफू नतमस्तक भएको बताए ।
त्यस्तै, माग्नेका बाउले गाँउमा जन्मिएको आफ्नो छोरोलाई आज देशैले यसरी चिनेको देख्दा निकै खुशी लागेको बताए ।